Moments leh saaxiibo 21
Miyuu jiraa sabab looga dhigo kuwa sheeganaya in dadka naftooda ka baxsan ay ku dhacaan shimbiraha ama xayawaanka?
Waxaa jira qaar ka mid ah dacwada, laakiin qoraalka guud ahaan waa wax run ah. Nafaqada bani'aadamku maaha inay ku shubaan shimbiraha ama xayawaanka haddii shuruudahaas lagu dabaqo aadanaha. Ka dib dhimashadii aadanaha, mabaadiida qaybta dhimashada ee uu ka soo jeedo waxaa lagu soo celiyaa boqortooyooyinka kala duwan ama alaabooyinka ay ka heleen dhismaha jidhka nin dhimanaya. Waxaa jira sababo badan oo laga yaabo inay sheegan karto in nafta qofku ku noolaan karo nolosha jirka xoolaha. Sababta ugu wayn ee war-celinta noocan oo kale ah waa dabeecad iyo caado; laakiin dhaqanku wuxuu inta badan ilaaliyaa runta qoto dheer ee qaabka aan macquul ahayn. Taageeradu waa foomka aasaaska u ah aqoonta hore. Mid ka mid ah kuwa heysta falsafadda iyada oon ogayn waxa macneheedu waxay aaminsan yihiin foomka, laakiin ma aha aqoonta. Kuwa wakhtiyada casriga ah waxay aaminsan yihiin dhaqanka ay dadka naftooda ku dhajiyaan xayawaankooda, inay xajiyaan dabeecadda ama dhaqanka sababtoo ah waxay ka lumeen aqoonta ay ka muuqato qoraalka iyo qoraalka suugaanta. Ujeedada dhirta iyo dib-u-dhiska maskaxda waa in ay bartaan waxa nolosha adduunka ku baran karto. Qalabka iyada oo ay ku baraneyso waa foomka xayawaanka xoolaha. Ka dib markii uu ka soo wareegay hal qof oo ah dhimasho oo uu ku saabsan yahay inuu dib u bilaabmo waxa uu isku dhistaa naftiisa oo wuxuu galaa qaab kale oo xayawaan ah. Laakiin ma gali mid ka mid ah noocyada xayawaanka. Ma gashaa jir xayawaan ah. Sababta ayaa ah in foomka xayawaanka adagi uusan bixin doonin fursada ah inuu sii wato waxbarashadiisa. Xayawaanka xoolaha ayaa maskaxda ku hayn lahaa oo keliya. Khaladaadka hal nololeed ma aha mid lagu saxo mindhicirka jirka xayawaanka haddii ay suurtagal tahay in maskaxdu ku jirto jir xooleed, sababtoo ah xoolaha iyo maskaxda ayaa ka jawaabi waayay taabashada maskaxda qofka. Heerka aadanaha ee horumarinta maskaxda ayaa lagama maarmaan u ah maskaxda si ay ula xiriirto foomka xayawaanka aadanaha; maskaxda xayawaanka ma aha qalab taariikhi ah ee maskaxda aadanaha si ay u shaqeeyaan. Haddii ay suurtogal tahay in maskaxdu ay dib ugu soo noqoto xayawaanka, maskaxda, marka ay dheceyso, waxay noqoneysaa mid miyir beelaysa maaddaama jirka maskaxda ku jira. Maqnaanshaha noocan oo kale ah ee maskaxda xayawaanka ku jiraa wuxuu noqonayaa ujeedo lahayn, ma jirto wax qalad ah oo la hagaajin karo oo loogu talagalay. Khaladaadka waa la saxi karaa, khaladka lagu saxay, iyo casharadii laga bartay iyo aqoonta la helay oo keliya marka maskaxdu ku jirto jir bini aadmi ah, waxayna la xiriiri kartaa maskaxda kaas oo ka jawaabi doona taabashadiisa. Sidaa darteed waa macquul in la maleynayo in wax kasta laga yaabo in la fuliyo sharciyo maskaxda ah ee ku dhaqmey habab bini aadaminimo ah waa inay ku gartaan nooc kasta oo xayawaan ah.
Waxaa la sheegay in The Editorial on Thought, Word, Vol. 2, No. 3, Diisambar, 1905, in: "Dadku waxay u maleynayaan iyo dabeecadda ka jawaab celinayaan fekerkiisa ku saabsan socdaalka joogtada ah inta uu ku ekaado isagoo la yaabay aragtida aragtidiisa. . . .Waxaan u maleynayaa oo dabeecad ahaan u kala jiidanayaa fikradiisa, dabeecaduna waxay dhalisaa ilamaheeda dhammaan noocyada dabiiciga ah sida carruurta fikirkiisa. Dhirta, ubaxa, xayawaanka, xayawaannada, shimbiraha, waxay ku jiraan qaabka uu ufududaynayo fekerkiisa, halka mid kasta oo ka mid ah dabeecadaha kala duwan uu yahay muuqaal iyo takhasus gaar ah oo ka mid ah rabitaankiisa gaarka ah. Dabeecadda ayaa dib u tarjumaysa sida nooc ka mid ah, laakiin fekerka dadka ayaa go'aaminaya nooca iyo nooca isbeddelkiisa oo kaliya oo uu fikirkiisa. . . .Shirkadaha la kulma noolasha jirka waa inay leeyihiin dabeecadahooda iyo qaabka ay go'aamiyaan fikradda dadka ilaa ay ka fekeri karaan. Dabadeedna uma baahnaan doono gargaarkiisa, laakiin waxay dhisi doonaan qaababkooda xitaa sida fikradda ah ee ninka hadda uu dhisto isaga qudhiisa iyo iyaga. "Ma kuu sharaxi kartaa si buuxda sida fikradaha kala duwan ee dadku u dhaqmaan arinta jismiga si ay u soo saaraan noocyo kala duwan oo xayawaanka ah sida libaaxa, xajmiga, duufaan, rattlesnake?
Si aad uga jawaabto su'aashan waxay ubaahantahay qoritaanka maqaal sida mid ka mid ah qorayaasha ereyada. Tani laguma sameyn karo booska Moments with Friends, waana in loo tagaa waaxda tifaftirka ee majaladdan. Si kastaba ha ahaatee, waan isku dayi doonnaa in aan faahfaahino mabaadii'da kaas oo lagu sheegay erayga kor ku xusan.
Waxyaabaha noolaha oo dhan waxaa ka mid ah oo keliya qofka leh hal-abuurka hal-abuurka (sida farriinta ka soo horjeeda.) Farsamada hal-abuurku waa awooda fikirka iyo rabitaanka. Fikraddu waa wax soo saarka maskaxda iyo rabitaanka. Marka maskaxdu ay ku dhaqanto dareenka fikirka ayaa la abuuray oo fikirkeeduna wuxuu ku qaataa qaabkiisa noloshiisa aduunka. Arrinta noloshu waxay ku jirtaa diyaarad jilicsan. Fikradaha qaadaya qaabka ayaa ku jira xaalad weyn oo muuqaal ah oo ku saabsan duulimaadka. Dooni sida mabda 'dabiiciga ah ee uu ku dhaqaaqay maskaxda ninku wuxuu abuuraa fikrado sida ayadoo loo eegayo nooca maskaxda iyo rabitaanka. Fikradahaas oo ku saleysan qaabka maskaxda iyo rabitaanka. Fikradahaas marka la soo saaro waa noocyada foomamka ka muuqda adduunka, noocyada noocan ahna waxay u dhaqmayaan qaybo ama qaybo nololeed oo aan abuuri karin foomamka naftooda.
Ninku wuxuu ku leeyahay dabeecada xayawaan kasta oo adduunka ah. Nooc kasta oo xayawaan ah ama noocyada waxay u taagan tahay rabitaan gaar ah waana in laga helaa aadanaha. Laakiin inkasta oo dabeecadaha xayawaanka oo dhan ay yihiin nin, isagu, waa noocyadiisa, waa dad, iyo xayawaankiisa isaga ayaa la arkaa waqtiyadaas oo kaliya sida uu u oggol yahay damaca iyo rabitaankiisa si ay u qaadaan oo u muujiyaan dabeecaddooda isaga. Waxay u eg tahay in dhammaan xayawaanka xayawaanku ay ahaayeen kuwo badan oo isku dhafan oo la isku duuduubay oo ay ku dhaawacmeen jirkiisa dhexdiisa oo uu yahay xayawaan isku dhafan oo dhan xayawaanka oo dhan. Daawo wejiga nin marka uu qabsado xishoodka, iyo dabeecadda xayawaanka ka dibna si cad ayaa loo arki doonaa isaga. Xabaalku wuu eegayaa wejigiisa wuxuuna arki karaa habkiisa. Gacanku wuxuu u ekaa sidii isaga oo ruxaya. Naxariistiisa waxaa loo mariyaa hadalkiisa iyo indhahiisa. Libaaxu waxay u ekaadaan cadho ama dufcaddiisa jidhkiisa. Midkasta oo kuwan ka mid ah ayaa meel kale u bixiya marka uu jirkiisa dhex marayo, iyo wejiga wajigiisa ayaa isbeddelaya xitaa nooca. Waa marka qofku u maleeyo dabeecada ama tuubada ama dawacada inuu abuuro fikradda ah qaboojiyaha, hurdiga, ama dawacada, iyo fekerku wuxuu ku noolyahay nolosha adduunka ilaa iyo inta lagu dhex galayo adduunyada maskaxda hoose si loo siiyo foomka hayadaha soo dhex galaya iyada oo loo marayo geedi socodka. Dhammaan noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee xayawaanka ayaa ku gudbaya foomka waxaana lagu soo bandhigaa wajiga nin iyadoo sawirro laga qaaday shaashadda. Si kastaba ha ahaatee, suurtagal maaha inuu yaxu u egyahay dawacaad ama dawacaad sida tuug ama mid ka mid ah kuwan sida abeesada. Xayawaan kasta wuxuu u dhaqmaa sida dabiiciga ah, waligiisna uma dhaqmo sida nooc kale oo xayawaan ah. Tani waa sababta oo ah, sida ku xusan qaamuuska, iyo sida la soo bandhigi doono, xayawaan kasta waa mid takhasus ah, nooc gaar ah ee rabitaanka dadka. Fikradu waa abuuraha nooc kasta oo adduunka ah, waana nin xayawaan ah oo malaynaya. Waxa uu u taagan yahay dunida oo dhan sida Ilaah, abuuraha, ayaa la sheegay inuu la xidhiidho nin. Laakiin waxaa jira hab kale oo qofku u yahay sababta muuqaalka xayawaanka ee adduunka jireed. Tani waxay sidoo kale sharxi doontaa mid ka mid ah macnaha badan oo ay tahay sababaha bayaannada qorniinka qadiimiga ah ee laga yaabo in ninkaasi uu dib ugu laabto ama u gudbiyo meydadka xoolaha. Waa tan: Inta lagu jiro nolosha dookha manka waa mabda 'xayawaan badan, oo aan lahayn qaab cad. Inta lagu guda jiro nolosha nin, rabitaankiisa isaga ayaa waligeed isbedelaya, mana jiro nooc xayawaan ah oo weli caddayn waqti dheer isaga oo leh. Yaxu waxaa raacaya dawacada, daawada dawacada, xayawaanka riyaha, riyaha adhiga adhiga iyo wixii la mid ah, amase wax kasta oo amar ah, tanina waxay sii socotaa ilaa nolosheeda haddii aysan jirin caqli gaaban nin mid ka mid ah xayawaanka badani waxay ku sifoobaan kuwa kale dabiiciga ah, waana ido, dawacad ama hurdiga ama ay naftiisa oo dhan ku dheehan tahay. Laakiin xaalad kasta, dhimashada, rabitaanka isbeddelka dabeecaddiisa ayaa loo qoondeeyay hal nooc oo xayawaan ah oo laga yaabo inay weli wakhti u leeyihiin foomka asaasiga ah ee bini'aadamka. Marka maskaxdu ay ka baxdo xayawaankeeda, xayawaanku si tartiib ah ayuu u daba-galayaa ujeedada bani-aadmiga ee bani-aadmiga ah wuxuuna qaadaa nooca xayawaanka runta ah. Xayawaankani markaa waa xayawaan aan lahayn geesinimada aadanaha. Waa xayawaankan oo la xidhiidha nooca fikirka loo abuuray ee loogu talagalay nooca fekerka iyo dabeecadda xayawaanka waxa uu ku dhashay dunida iyada oo loo marayo jir xoolo ah oo noociisa ah oo horay loogu yeero jiritaanka hab isku mid ah.